Askartii AMISOM ee Muqdisho lagu xiray iyo alaabtii ay Iibinayeen oo lasoo bandhigay (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidamada booliska dowlada Soomaaliya ayaa maalintii shalay xabsiga dhigay Shan Askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo 10 ruux oo Soomaali ah kuwaasoo iibinayay qalab ciidanka AMISOM ah leeyihiin.
Askarta iyo dadka ayaa ciidamada amaanka Soomaaliya waxay ka qabteen Garaash ku yaala Wakaaladii Biyaha ee aga’gaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen. Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu qabtay askarta AMISOM iyo dadkan ayaa sheegay in ciidanka amaanka ay daba socdeen arintaan ugu danbeyntiina maanta ay u suurta gashay inay qabtaan shaqsiyaadkaan & waxyaabaha ay iibinayeen.
“Alaabo badan oo ay Iibinayeen ayaa lagu soo qabtay kuwaasoo ka mid ah qalabka AMISOM, waxaana ku jira Jawaanada ciida lagu shubo ee difaaca, telefoono mobile ah, qalabka ama booshashka rasaaska lagu qaato, shidaal badan iyo alaabo kale oo laga soo xaday xarumaha AMISOM” ayuu yiri taliyaha.
Wasiirka amniga Gudaha ee Xukuumada Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in arintaan ay tahay danbi aysan ka haraynin dowlada Soomaaliya.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa asna dhankiisa sheegay in ciidanka AMISOM ee la qabtay iyo dadka la shaqaynayay sharciga la horkeeni doono.
Waa markii ugu horeysay ee ciidamada amaanka dowlada ay xabsiga dhigaan askar ka tirsan AMISOM, iyadoo illaa hadda aysan jirin war dhacdadan uu ka soo saaray taliska ciidamada AMISOM.